‘फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती छ’ – Sajha Bisaunee
‘फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती छ’
सीता वली । २ पुष २०७७, बिहीबार ०८:५३ मा प्रकाशित
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ६ कर्णाली प्रदेशको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हो । यो राजधानीको वडा भएकाले प्रशासनिक र पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । प्रदेशको मुख्यद्वारको रूपमा रहेको वडामा बजार, बसपार्क, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी अस्पताल, मुख्य व्यापारिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न संरचनाहरू छन् । बढ्दो जनसंख्याको चापले गर्दा यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । मुख्य बजारको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यहीँ वडालाई छ । घर तथा व्यवसाय र उद्योगबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको काम जटिल बन्दै गएका बेला त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र हाल वडा कार्यालयले गरिरहेका समग्र गतिविधिको सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेलसँग गरेको कुराकानीः
मोतीप्रसाद कँडेल वडा अध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६
तपाईंको वडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ?
हामीले वडाको फोहोर व्यवस्थापन टेण्डर प्रक्रियाबाट गर्ने गरेका छौँ । ग्रिनसिटी सेनिटेशन सेवा नेपालले अहिले नगरको फोहोर उठाइ ल्याण्डफिल्ड साइटमा फाल्ने गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वडाका सम्पूर्ण घरधुरी संख्या र व्यवसायीलाई सरसफाइ कार्डमार्फत समेटेका छौँ । एउटै घरमा फरक चुला भएकालाई समेत सोही अनुसार सरसफाइ कार्ड वितरण गरिएको छ । त्योबाहेक कुहिने र नकुहिने फोहोर फाल्नको लागि छुट्टाछुट्टै डस्टविन राख्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । करिब एक हजारभन्दा बढी डस्टविन कुहिने फोहोर राख्नको लागि वितरण गरिएको छ । नकुहिने फोहोरका लागि भने घरधनी स्वयम् आफैंले अनिवार्य खरिद गरी राख्नका लागि अनुरोध गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वडाले कार्यविधि नै निर्माण गरी लागू गरेको अवस्था छ ।
सरसफाइ कार्डले फोहोर व्यवस्थापनमा कसरी सघाउँछ ?
यसले नगरमा कति घरधुरी छन्, एउटै घरमा कति चुला छन्, जहाँबाट फोहोर कति आउँछ भन्ने कुराको जानकारी समेत हुन्छ । अर्को कुरा हामीले फोहोर व्यवस्थापन वडाको मात्रै बजेटले सम्भव पनि छैन । त्यसैले कार्यविधि निर्माण गरी सोही अनुसार सरसफाइ कार्ड निर्माण गरेका हौँ । फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ मा तोकिए बमोजिम वडाले करसमेत उठाउने गरेको छ । सरसफाइ कार्ड वितरण गरेपछि हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । नियमित रूपमा वडावासीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि रकम बुझाउनुहुन्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रहरी र प्रशासनको सहयोग भएको भए वीरेन्द्रनगर साँच्चिकै सुन्दर नगर बन्ने थियो ।
वीरेन्द्रनगरमा दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढ्दो छ । दैनिकजसो थुप्रै फोहोर उत्पादन हुन्छ । नगरबाट उठाइएको फोहोरलाई कहाँ, कसरी लगेर बिसर्जन गर्ने गर्नुभएको छ ?
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ को तारेभिरमा डम्पिङ्ग साइड छ । त्यहीँ लगेर फोहोरलाई बिर्सजन गर्ने गरेका छौँ । नेपाल सरकारले करिब पाँच विगाहा जमिन फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध गराएको छ । दैनिकजसो वीरेन्द्रनगरमा थुप्रै फोहोर उत्पादन हुन्छ । स्थायी रूपमा नगरमा बस्ने स्थानीय बासिन्दाले भन्दा पनि बाहिरबाट आउनेले बढी फोहोर गरेको देखिन्छ । बाटोमा हिँड्ने बटुवाले खाएर फाल्ने सूर्तिजन्य पदार्थका खोस्टा, पानीका बोतल तथा सुन्तला बदामका बोक्रा र प्लाष्टिकका झोला नै बढी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौतीकाबीच काम गरिरहेका छौँ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा कस्ता खालका चुनौती भोग्नु परेको छ ?
हाम्रो वडामा काम गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती भनेकै फोहोर व्यवस्थापन नै हो । फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज होस् भनेर कार्यविधि निर्माण गरियो । तर कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भएको छ । हामीले फोहोर गरेको प्रकृति हेरी जरिवाना समेत तोकेका छौँ । केहीले त सहजै जरिवाना तिर्न पनि मान्नु हुन्छ । कोही अति नै अटेरी हुनुहुन्छ । अटेरीलाई प्रशासन नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले स्थानीय प्रशासनबाट खासै सहयोग पाउन सकेका छैनौँ । बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति जसले गुट्खा र सूर्ति खाएर सडकमा फाल्नुहुन्छ । सुन्तला तथा बदाम खाएर बाटैमा फाल्नुहुन्छ । अनि सामान खरिद गरेको प्लाष्टिकको झोलासमेत बाटैमा फाल्ने भएका कारण जति सफा गरे पनि दिनमा उति नै फोहोर जम्मा भइरहन्छ । बाटोमा ड्यिूटीमा रहेको प्रहरी, बाटोमा हिँड्ने सचेत नागरिक र व्यवसायी तथा घरधनीले बाटोमा फोहोर फाल्नेलाई सचेत र कारबाही गर्न सघाएको खण्डमा हामीलाई सहज हुने थियो । तर सबै मुखदर्शक भएर बसिदिँदा झनै गाह्रो भएको छ । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वडाकै हो भन्ने सोचले गर्दा ठूलो हैरानी व्यहोर्नु परेको अवस्था छ ।
वीरेन्द्रनगर बजारक्षेत्रलाई फोहोरमैलारहित राख्न कसले के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त आम नागरिक नै सचेत हुन आवश्यक छ । आफूले गरेको फोहोर कम्तीमा आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । यहाँ त हेर्दा सुकिला–मुकिला देखिए पनि खाएर सडकमै फाल्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार्नु आवश्यक पर्छ । हामीले सडकका छेउछाउमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि डस्टविनको व्यवस्थापन गरेका छौं । मानिसहरूको त्यता ध्यान जाँदैन । अर्को कुरा सडकमा हुने विभिन्न कार्यक्रमका कारण समस्या परेको छ । करिब दुई सय बढी डस्टविन सडकका छेउमा राखिएको छ । तै पनि मानिसहरू त्यसमा फोहोर हाल्दैनन् । केही महिना पहिले सडक दुर्घटनाका कारण कालीकोटका एक जना युवाको मृत्यु भयो । त्यसबेला सडक आन्दोलन गरेका आफन्तले एक सयभन्दा बढी डस्टविन जलाइदिए । अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अर्को कुरा केही व्यक्तिले फोहोर व्यवस्थापनका सामग्री चोरी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता सामान आफ्नो घरमा लैजाने गरेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रहरी र प्रशासनको सहयोग भएको भए वीरेन्द्रनगर साँच्चिकै सुन्दर नगर बन्ने थियो । कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ । तर कार्यान्वयनमा प्रशासनको सहयोग छैन । हामीहरू अगाडि फोहोर उठाउँदै जान्छौं पछाडिबाट फोहोर गर्दै जानेहरूको जमात उस्तै छ । फोहोर नफाल्नुुस् भन्न जाँदा समेत उल्टै वडाका कर्मचारीहरूलाई हातपात र अपशब्द बोल्ने गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि वडाको आगामी योजना के छन् ?
ठूलो उपलब्धी त हामीले निर्माण गरेको कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन नै हो । त्यो गर्न सके वडामा फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गराउनको लागि जीआईएस सफ्टवेयर निर्माणको तयारी भइरहेको छ । जसको फोहोर उसैको व्यवस्थापन भन्ने मूलमन्त्रलाई यसले सहयोग गर्छ । अर्को कुरा हामीले सचेतनाका कार्यक्रम अझै व्यापक बनाउनुपर्ने छ । यस किसिमका योजना बनाएर हामी अघि बढेका छौँ । हरेक नागरिक सचेत भएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यत्ति गाह्रो पनि छैन ।
यहाँका नागरिकलाई मात्रै नभइ प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकलाई मैले सकेसम्म आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सार्वजनिक स्थानमा फोहोर नगर्न र गर्नेलाई समेत सचेत आम नागरिक लाग्नुपर्छ । आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गरौं र सभ्य नागरिकको परिचय दिऔँ भन्ने मेरो आग्रह हो । जथाभावी फालिएको फोहोरले हामीलाई नै अस्वस्थ बनाउँछ । त्यसैले सबै नागरिक सचेत भएर वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर नगर बनाऔँ ।